आज महिनाको अन्तिम दिन असार ३१ गते खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्नेछ । आषाढ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णीमाका दिन खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्ने भएको हो । यो चन्द्र ग्रहण एशिया, युरोप, अफ्रिकी देशहरु, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरीका को पूर्वी भागबाट देखिनेछ । चन्द्र ग्रहण नेपाली समय अनुसार रातको १ बजेर ४६ मिनेटमा सुरु भएर राति ३ बजेर १५ मिनेटमा मध्य भै ४ बजेर ४५ मिनेट सम्म ग्रहण लाग्नेछ । हिन्दु धर्ममा आस्थावान हरुकालागि असार ३१ गते मंगलबार दिउँसो ४ बजेर ४६ मिनेट देखि सुतक लाग्ने हुनाले बाल, वृद्ध र बिमारी देखि बाहेकले भोजन नगर्नु उत्तम हुनेछ ।
मुग्लिङको ‘आर्क ब्रिज’ मा गुड्न थाले गाडी, यस्तो बन्यो आर्क ब्रिज
Previous Article गलबन्दीकि चर्चित मोडल अन्जली अधिकारी प्रहरीको ड्रेसमा………. हेर्नुस भिडियोमा
Next Article बिहिबारका दिन जन्मिएको मान्छेको भाग्य यस्तो हुन्छ ! हेर्नुस जानिराख्नुस